About Us - Ningnbo Yierka Shaabadihii Co., Ltd
Ningbo Yierka Shaabadihii Co., Ltd waxaa la aasaasay sanadkii 1982 si ay baaritaan, waxay yeeshaan soo saaridda iyo iibiyaan shaabadood Haydarooliga iyo pneumatic. waxyaabaha quwad Ningbo Yierka ayaa macmalay la technology casri ah oo tayo leh ka xoogbadan, iyo xoog macaamiisha diiradda ayaa naga guuleystay kalsoonida macaamiisha cusub tan iyo our aasaasay.
Yierka sida khaaska ah waxay leedahay xarun cilmi caaryada xirfadle kooxda iyo caaryada processing oo ay khibrad design wax soo saarka, horumarinta caaryada iyo is-dhexgalka wax soo saarka, hadda in ka badan 20000set wasakhahaasi. Yierka sida khaaska ah sidoo kale waxa uu leeyahay badan oo daawooyinka wax seal iyo isticmaalka alaabta ceeriin tayo sare leh keeno iyo ka dib heerarka caalamiga ah habka isku-soo-saarka la jaangooyey karaan si ay u siiyaan macaamiisha xal quwad xirfad gaar ah.
Yierka sida khaaska ah ma aha oo kaliya caanka ah ee Shiinaha, laakiin sidoo kale ka iibiyey Bariga Yurub, Bariga Dhexe, South American, Japan iyo koonfur bari Asia. Yierka Shaabadihii adag u aaminsan yihiin in curinta iyo daacadnimada waa falsafad shirkadaha loo baahan yahay si loo ballaariyo jahooyinka iyo inay naga caawiyaan macaamiisha cusub iyo wax duug koraan nala, xoog uga xoog.